Yuhuuda oo sii xoojisay duqeymaha Gaza iyo Masar oo sheegtay iney taageereyso shacabka Falastiin - iftineducation.com
Yuhuuda oo sii xoojisay duqeymaha Gaza iyo Masar oo sheegtay iney taageereyso shacabka Falastiin
iftineducation.com – Ugu yaraan 19 Falastiiniyiin ah iyo saddex Yuhuud ah ayaa ku dhintay weeraradii u dambeeyay ee Isra’el iyo Xamaas ka dhex qarxay oo bilowday Arbacadii la soo dhaafay.
Qaraxyo waaweyn ayaa laga maqlay magaalada Tel Aviv ka dib markii ay gaareen gantaalaha ay Xamaas farsameyso ee loo yaqaano Gazaam waxaana la daaray dhawaaqa digniinta ah, marka Xamaas ay soo riday gantaallo.
Ra’iisul Wasaaraha Masar, Hisham Qandil, ayaa ugu baaqay Israaiil inay joojiso duqeynta dhinaca hawada ee ay ku hayso magaalada Gaza.
Booqasho gaaban oo uu ku tagay halkaasi ayaa waxa uu muujiyay sida ay u taageersan yihiin dadka reer Falastiin, waxaana uu sheegay waxa uu arkay inay tahay masiibo, isla markaana aan laga aamusi karin.
Duqeynta hawada ee Qasa ayaa sii socotay iyo gantaallada laga ridayo Qasa ee dhinaca Israaiil loo ridayo intii booqashada uu ku jiray raisul wasaaraha Masaarida.
Wasiirka Arrimaha dibedda ee Tuniisiya ayaa ku dhawaaqay in uu isna booqan doono Marinka Qasa maanta oo Sabti ah, waxaana sidoo kale lagu wadaa in madax kale ay booqdaan.
Dagaalka labada dhinac ayaa waxa uu ka danbeeyay markii la dilay hoggaamiye sare oo ka tirsanaa militeriga Xamaas kaasoo lagu magacaabi jiray Axmed Jabari, waxaana gaari uu la socday oo marayey Gaza gantaal la helay Yuhuuda.
Xoghayaha arrimaha dibedda ee Britain, William Hague ayaa sheegay in Xamaas ay qaadaneyso masuuliyadda dhibaatada taagan hadda.
Dhinaca kale Madaxweynaha Masar, Maxamed Morsi ayaa cambaareeyey weerarada Israaiil oo uu sheegay inay sii kordhinayaan ammaan darrida gobolka.
Madaxweynaha Maraykanka Obama ayaa isna sheegay in weerarada labada dhinac aan xiligan loo baahneyn, wuxuuna xusay in Israaiil ay xaq u leedahay iney is difaacdo haddii lagu soo xad gudbo.
Dadka falanqeeya siyaasadaha caalamka ayaa sheegaya in gumaadka Yuhuudu ka wado dhulka reer Falastiin ay fursad uu ku sii xoogeysto ururka Al-Qaacida oo mudooyinkan la hadal kayey in awoodoodii ay daciiftay, ayna dad muslimiinta ah ee careysan ka heli doonaan dagaalyahano cusub.
Shidaal baaristii Puntland ka socotay oo hakad ku yimid ka dib markii ay sheegeen shirkadihii baarayey…
Madaxweynihii xilka ka degay Shariif iyo qoysaskiisa oo nolol cusub ay uga bilaabatay dalka Ugnadha